Namathisela amafayela kumilayezo esuka ku-Google Drayivu ku-Gmail | Kusuka kuLinux
Namathisela amafayela emilayezweni esuka ku-Google Drayivu ku-Gmail
Gmail ayenzi lula izinto eziningi futhi nangesikhathi sokubhala imiyalezo, akuyona nje kuphela indaba yokugcina ibhokisi lokungenayo lihlelekile ngoba umsebenzi wokuthumela imiyalezo futhi yinto ebinakekelwa futhi esibe nezinguquko eminyakeni ethile eyedlule iba yinto eyodwa wewindi eliyinhloko lokubhala imilayezo ngaphandle kokushiya iwindi eliyinhloko. Kuko konke lokhu kungezwa ukuthi kungenzeka Namathisela amafayela ukuze imiyalezo funa -Google Drive ku-akhawunti yethu ye-Gmail, okunengqondo uma kubhekwa ukuthi yomibili i-Google Drayivu ne-Gmail ngeka-Google, kuyinto ejwayelekile ukuthi siyabona besebenza ndawonye.
Kusizuzisa ngaphezu kwanoma yini endabeni ye- thumela imiyalezo, uma sine-Google Drayivu njengensizakalo isitoreji sefu ukonga yonke imininingwane yethu ngakho-ke akufanele kusimangaze ukuthi ku-Gmail singakwazi ukufinyelela i-akhawunti yethu futhi sikhethe amafayela esifuna ukuwabelana noxhumana nabo abathile. Kunezizathu eziningi zokuthi kungani kubalulekile ukusebenzisa zombili izinsizakalo, into yokuqala okufanele siyenze ukubhala umyalezo omusha, sibhala umyalezo obuzwayo njenganoma yimuphi omunye ngaphandle kokukhohlwa ukuthi ngaphambi kokuwuthumela kufanele sinamathisele ifayela elithile eligcinwe I-Google Drayivu.
Lapho sesiqedile ukubhala umyalezo futhi sesikulungele ukuthumela kunoma yibaphi oxhumana nabo ku-Gmail, esikwenzayo ukukhetha inketho "Google Drayivu" ngoba umqondo Namathisela amafayela ezigcinwe kulesevisi yokugcina amafu, uma simane sikhethe ukunamathisela ifayela, okuzokwenzeka ukuthi kuzofanele silayishe ifayela kusuka kukhompyutha yethu.
Ekugcineni sikhetha ifayela le- ifayela lokunamathiselaLapho ukhetha iGoogle Drive, iwindi lizovuleka futhi lizosikhombisa wonke amafayela agcinwe kule sevisi, uma emaningi kakhulu, into esheshayo ongayenza ukusebenzisa injini yokusesha ukuze ngokufaka igama noma igama lefayela lelo sifuna ukunamathisela, singakuthola kalula. Njengoba sesikhethe ifayili, manje sesingathumela umyalezo olula njengaleyo futhi ngaphezu kokusheshisa umsebenzi wokuthumela imilayezo ngamafayela e-Google Drayivu, kuyindlela ethokozisayo yokusebenzisa zombili izinsizakalo koyedwa, noma lokhu kuthambekele kakhulu ku isevisi ye-imeyili.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Namathisela amafayela emilayezweni esuka ku-Google Drayivu ku-Gmail
Okokufundisa: I-Loop File Systems
Landa kusuka ezibukweni ezisheshayo ku-Arch Linux nge-Reflector